China N'ogbe mkpọchi uwe ngwa suppliers, Manufacturers - GRX mmanya (HONG Kong) CO., LTD.
.Lọ >Ngwaahịa >Mkpọchi uwe
3H ikechi mkpọchi uwe ọdụ usoro
Nke a 3H mkpọchi uwe ọdụ usoro iji 65copper, ụlọ ọrụ mechaa ISO9001: 2008 àgwà management usoro asambodo, a ọnụ ọgụgụ nke ya nchọpụta Kemịkalụ, niile na ngwaahịa ndị si SGS, ule ruru eru ịbanye ahịa, dị a ụda ngwaahịa mma management usoro, na na-emezi ngwa ngwaike na akụrụngwa, ma gbalịsie ike ijide ahịa na mma.
4H nkechi mkpọchi uwe ọdụ usoro
5H Zip-elu ọdụ
Nke a 5H mkpọchi uwe ọdụ usoro iji 65 ọla kọpa, ụlọ ọrụ mechaa ISO9001: 2008 àgwà management usoro asambodo, a ọnụ ọgụgụ nke ya nchọpụta Kemịkalụ, niile na ngwaahịa ndị si SGS, ule ruru eru ịbanye ahịa, dị ka a ụda ngwaahịa mma management usoro, ma melite thehardware na akụrụngwa ngwanrọ oge niile, ma gbalịsie ike ijide ahịa na mma.
7H ọdụ zip
Nke a 7H mkpọchi uwe ọdụ usoro iji 65 ọla kọpa, ụlọ ọrụ mechaa ISO9001: 2008 àgwà management usoro asambodo, a ọnụ ọgụgụ nke ya nchọpụta Kemịkalụ, niile na ngwaahịa ndị site SGS, ule ruru eru ịbanye ahịa, mbubata zuru okè ngwaahịa mma management usoro, na na-emezi ngwa ngwa na akụrụngwa ngwanrọ, ma gbalịsie ike ijide ahịa na mma.
8H Zip-elu ọdụ
Nke a 8H mkpọchi uwe ọdụ usoro iji 65 ọla kọpa mmepụta, ụlọ ọrụ mechaa ISO9001: 2008 quality management usoro asambodo, a ọnụ ọgụgụ nke ya nchọpụta Kemịkalụ, niile na ngwaahịa ndị si SGS, ule ruru eru ịbanye ahịa, mbubata zuru okè ngwaahịa mma management usoro, ma melite thehardware na akụrụngwa ngwanrọ oge niile, ma gbalịsie ike ijide ahịa na mma.
10H zipa ọdụ
Nke a 10H mkpọchi uwe ọdụ usoro iji 65 ọla kọpa, ụlọ ọrụ mechaa ISO9001: 2008 àgwà management usoro asambodo, a ọnụ ọgụgụ nke ya nchọpụta Kemịkalụ, niile na ngwaahịa ndị si SGS, ule ruru eru ịbanye ahịa, dị ka a ụda ngwaahịa mma management usoro, ma melite ngwaike na akụrụngwa ngwanrọ, ma gbalịsie ike ijide ahịa na mma.